Gudiga doorashada dadban oo war kasoo saaray mashaqo kadhacday Jowhar. – Radio Daljir
Gudiga doorashada dadban oo war kasoo saaray mashaqo kadhacday Jowhar.
Nofeembar 19, 2016 3:24 b 0
Muqdisho, Nov 19 2016-Guddiga Federaalka Hirgelinta Doorashada Dadban (GFHDD) waxuu aad uga walaacsan yahay rabsahadaha gacan ka hadalka ah ee ka dhacay xarunta doorashada ee Hirshabeelle /Jowhar oo xalay oo ay taariikhdu tahay 18/11/2016, iyada oo ay socotay codeeynta doorashada kursiga Beesha Jidle/ Gugundhabe.
Haddaba, Guddiga oo muhiimad gaar ah siinaya amniga Deegaan Doorashada Hirshabeelle/ Jowhar, gaar ahaan amniga Guddiyada Doorashooyinka, Ergada iyo Musharaxiinta, waxuu shaacinayaa in si ku meel gaar ah loo hakiyay qabashada doorashooyinka kuraasta dhiman ee Golaha shacabka ee Jowhar ka dhici laheyd.
Ra’iisul Wasaare Cumar,”Nabadda Galkacyo Waa In Wadajir Looga Shaqeeyaa”.